Ndị anyị bụ - Sichuan Wenyu Electric Co., Ltd.
Charlọ Ọrụ Nchaji AC
Ebe nkwụ ụgwọ DC
Ozi na eburu
G ISN IS B WE WEIYU ELECTRIC?
Weiyu Electric, bụ onye enyemaka nke ụlọ ọrụ edepụtara (Stock Code: 300820) -Sichuan Injet Electric Co., Ltd. N'ime ndị ọrụ 500, ụlọ ọrụ 22000-na-abụghị uzuzu, 169 patent certifications, 24 afọ 'ahụmahụ na eletriki ụlọ ọrụ ike, Injet enwetawo otuto dị ukwuu site na ụlọ ọrụ ndị ama ama mba ụwa maka ngwaahịa na ọrụ dị elu dịka ABB, Siemens, Schneider, GE, GT, SGG na wdg.
Anyị bụ ndị omiiko banyere ihe e kere eke na ihe ịma aka, ewepụtara iji mezuo nkwa anyị kwere onye ọ bụla ahịa ọ bụla na oru ngo. Anyị na-ewusi mmekorita ya na mahadum na ulo akwukwo nyocha, ma raara onwe ya nye ime ka ndi ahia ahia na ihe omuma ohuru. Ọ dịghị ihe pụrụ igbochi anyị ime ka ihe okike dị mfe ma baa uru.
Tọrọ ntọala na 2016, WEIYU bụ akara "EVSE" (Electric Vehicle Supply Equipment) nke Sichuan Weiyu Electric Co., Ltd. bụ onye raara onwe ya nye ihe ọhụụ, ogo, na ntụkwasị obi na ngalaba ụlọ ọrụ ike. Na-aga n'ihu mgbalị nke ndị ọkachamara R & D na Sales & Service Team, Weiyu Electric na-ama ike n'ichepụta nile di iche iche nke EV odori ụgbọ na-enye ndị ahịa na a zuru Nchaji ngwọta. OEM & ODM ma ọ bụ enyemaka ngwa injinia dịkwa.
N'oge nrụpụta na imepụta kwa ụbọchị, usoro niile dabere na sistemụ mmado ISO 9001.
A na-arụpụta ihe ndị bụ isi na ụlọ ọrụ nne anyị -Injet Electric, nke nwere 22000 ㎡ ụlọ ọrụ na-abụghị ntụ, Usoro ọ bụla nwere ọkwa dị elu iji hụ na ngwaahịa dị mma. A ga-echekwa ihe eletriki na ụlọ nkwakọba ihe-mmiri mgbe niile. All sekit osisi ga-ese na-mmiri-àmà, mgbochi ájá, nnu-ekpe ekpere na-àmà, na mgbochi static.
Akụkụ ngwanrọ ahụ nwere bọọdụ sekit, usoro nchịkwa na onye njikwa. Akụkụ atọ a nwere usoro mmepụta ha pụrụ iche, nke a ga-agbaso iji hụ na nrube isi zuru oke na ihe achọrọ.
Enwere ike ịchọta ma ọ bụ ngwanrọ na ngwanrọ niile na nọmba akara, ụbọchị nnyefe, ndekọ nnwale, ndekọ ihe achọrọ, ihe ndekọ nnwale akụrụngwa na ndekọ ịzụta ihe akụrụngwa. Ihe niile anyị na-eme bụ iji hụ na ogo iji mejuo mkpa ndị ahịa anyị.
Onwe ha R&D
Anyị nwere ndị ọrụ R&D ọkachamara nwere ikike mmepe siri ike. 51 etinyere patents na-ama na etinyere, na ọnụ ọgụgụ na-nọgidere na-eto eto.
Nchaji Stations Ev, Igwe eletriki ugbo ala, Charlọ Ọrụ Char Char, Igwe eletriki ugbo eletrik na ụdị 2 nkwụnye, Charkwụ gwọ Evgwọ, Ebe nkwụ ụgwọ Ev,